Xinhua Myanmar - အိန္ဒိယနိုင်ငံ အာသံပြည်နယ်ရှိ Goroimari ရေကန်ကြီးတွင် ရွာသားများ ငါးဖမ်းပွဲတော်ကျင်းပ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ ငါးဖမ်းပွဲ အာသံပြည်နယ် ကောက်ရိတ်ပွဲတော်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Guwahati မြို့မှ ၅၀ ကီလိုမီတာအကွာခန့်တွင်တည်ရှိသော Panbari ကျေးရွာရှိ Goroimari ရေကန်ကြီးတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Bhogali Bihu ငါးဖမ်းပွဲတော်မြင်ကွင်းများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
ဂူဝါဟာတီ၊ အန္ဒိယ ၊ ဇန်နဝါရီ ၁၄ ရက် (ဆင်ဟွာ)ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် မြို့တော် Guwahati မြို့မှ ကီလိုမီတာ ၅၀ အကွာခန့်တွင် တည်ရှိသော Panbari ကျေးရွာရှိ ဂိုရိုင်မာရီရေကန်ကြီး (Goroimari) တွင် ကောက်ရိတ်သိမ်းရာသီပြီးဆုံးချိန် နှစ်စဉ် ကျင်းပလေ့ရှိသော ဒေသပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်သည့် Bhogali Bihu ငါးဖမ်းပွဲတော်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရွာသားများ အများအပြားပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Guwahati မြို့မှ ၅၀ ကီလိုမီတာအကွာခန့်တွင်တည်ရှိသော Panbari ကျေးရွာရှိ Goroimari ရေကန်ကြီးတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Bhogali Bihu ငါးဖမ်းပွဲတော်မြင်ကွင်းများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း အာသံပြည်နယ် Guwahati မြို့မှ ၅၀ ကီလိုမီတာအကွာခန့်တွင်တည်ရှိသော Panbari ကျေးရွာရှိ Goroimari ရေကန်ကြီးတွင် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Bhogali Bihu ငါးဖမ်းပွဲတော်မြင်ကွင်းများအားတွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)…………………………………………
Asia Album: Community fishing at Goroimari Lake in northeast Indian state of Assam
GUWAHATI, India, Jan. 14 (Xinhua) -- Indian villagers participate in community fishing during the Bhogali Bihu celebration at Goroimari Lake in Panbari village, some 50 kilometers from Guwahati, capital of northeast Indian state of Assam, India. Bhogali Bihu isafestival celebrated in Assam to mark the end ofaharvesting season.
Photos caption - Indian villagers participate in community fishing during the Bhogali Bihu celebration at Goroimari Lake in Panbari village, some 50 kilometers from Guwahati, capital of northeast Indian state of Assam, India on Jan. 13, 2021. (Str/Xinhua)
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံနှင့် အာဆီယံအကြား ဆက်ဆံရေး ထပ်မံမြှင့်တင်ရန် ကတိပြု
Next Article သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ လေတပ် (SLAF) အနံ့ခံလေ့ကျင့်ရေးခွေးများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား